Manchester City oo Barcelona ogeysiisay qiimaha ay ku iibineyso Raheem Sterling – Gool FM
(Manchester) 19 Okt 2021. Inkastoo ay xaaladda dhaqaale ee naadiga Barcelona ay liidato, haddana ay waxay isku dayeysaa inay sameyso saxiixyo dheeraad ah xagaagan kuwaasoo ay ku xoojineyso safkeeda gaar ahaan qaybta weerarka, waxaana bartilmaameedyadeeda ka mid ah laacibka Manchester City ee Raheem Sterling.
Hase ahaatee, waxaa damaceeda laf dhuun gashay ku noqonaya kooxda Ingiriiska ka dhisan taasoo weeraryahankeeda dul dhigtay qiimo lacageed gaaraya 80 milyan oo euro.
Waaxda farsamada ee kooxda Barca ayaa diiwaanka ku qoray xiddigo ka ciyaara weerarka si la isugu hagaajiyo safkeeda, waxaana booska koowaad kaga jira xiddigii hore ee Liverpool.
Si kastaba ha ahaatee, Sterling ayaa haatan xaalad adag ku qaadanaya Etihad Stadium isagoo lumiyay booskiisa koowaad ee shaxda Macallin Pep Guardiola, waxaana laacibka reer England uu qiray inuu doonayo ka tagista Man City.
Xiddiga bartilmaameedka u ah Man United ee Trippier: "Waxaan jeclaan lahaa inaan markale ka ciyaaro Premier League"